China 80A FINGERTIP PULSE OXIMETER ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | အရှေ့တိုင်း
1. အရောင် OLED display လေးညှနျကွားချိန်ညှိ။ 2. SpO2 နှင့်သွေးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်မှု, waveform display ကို။ ၃။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသည်၊ နာရီ ၅၀ အထိအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည်။
ပြသရန် OLED နှစ်ခုအရောင်ပြသမှု၊
SpO2 အတိုင်းအတာ: 70 ~ 99%resolution: ± 1%
တိကျမှန်ကန်မှု: ± 2% (70% ~ 99%), မသတ်မှတ်ရသေးသော (<70%)
သွေးခုံနှုန်း အတိုင်းအတာအကွာအဝေး: 30 ~ 240 bpmresolution: ± 1%
တိကျမှန်ကန်မှု: ± 2bpm သို့မဟုတ်± 2% (ပိုကြီးသည်ကိုရွေးချယ်ပါ)
Perfusion အနိမ့် .40.4%
မဏိ နှိုးနိမ့်သောနှိုးစက်နှိုးစက် (Spo2 နှင့် PR)
ပါဝါ 1.5V (AAA အရွယ်အစား) alkaline များဘက်ထရီက x 2
ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား: 2.6 ~ 3.6V
အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်ပါ ၈ စက္ကန့်ထက်ပိုသော Oximeter တွင်အချက်ပြမှုမရှိလျှင်အလိုအလျောက်ပိတ်ပါ
အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန် 60 * 38 * 30mm; ၅၀ ဂရမ် (ဘက်ထရီမပါဘဲ)
အာမခံအချိန် 1 နှစ်
ပို့ဆောင်ချိန် ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်5အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်း
လက်မှတ် CE က ISO FDA
အသွေး oxymeter ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
၁) ။ အရောင် OLED display လေးခု ဦး တည်ချက်ချိန်ညှိ
2) ။ SpO2 နှင့်သွေးခုန်နှုန်းစောင့်ကြည့်မှု, waveform display ကို
၃) စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးနာရီပေါင်း ၅၀ အလုပ်လုပ်သည်
၄) အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလေးချိန်ပေါ့ပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်
၅) အနိမ့်ဗို့အားအချက်ပြ display, အလိုအလျောက်ပါဝါ - ပိတ်
၆) စံ AAA ဘက်ထရီများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
၇ ။ အရွယ်အစား: 62mm × 32mm × 33mm
၁) ။ perfusion အနိမ့်:＜0.4%
2) ။ အတိုင်းအတာ: 70% -99%
၃) တိကျမှန်ကန်မှု - ၇% မှ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိ± 2%၊ မသတ်မှတ်ရသေးသော (＜၇၀%）SpO2 အတွက်
၅) resolution: ± 1%
၁) ။ အတိုင်းအတာ: အကွာအဝေး: 30BPM-240BPM
2) ။ တိကျမှန်ကန်မှု: ± 1BPM or ± 1% (ပိုကြီးတဲ့)
၃) ပါဝါ - AAA 1.5V alkaline batteries နှစ်ခု
၄) ပါဝါစားသုံးမှု: 30mA အောက်
100pcs / ပုံးပုံး
ပုံးအရွယ်အစား: 35 * 23 * 41cm
Gw: 15kg ကဘ: 14kg
က။ အာမခံကာလအတွင်း Oxymeter သည်လူမဟုတ်သောအချက်များကြောင့်ပျက်စီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်မှအတည်ပြုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးပို့နိုင်သည်၊ ultrasound အားဗီဒီယို၊ Skype၊ Whatsapp နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ နောက်တစ်မျိုး ထပ်မံ၍ စက်ထဲသို့ထပ်မံပို့ပေးပါ။
ရှေ့သို့ 80B လက်ညှိုးထိုးသွေးကြော OXIMETER
နောက်တစ်ခု: CE ISO နှင့် FDA နှင့်အတူ compressor nebulizer
W01T WRIST အမျိုးအစား Pulse OXIMETER
ORT50D FINGERTIP သွေးခုန်နှုန်း OXIMETER
50E လက်ညှိုးимпульс OXIMETER